Safal Khabar - नेकपाका नेताहरुको काण्डै–काण्ड
शनिबार, १७ जेठ २०७७ (Saturday, 30 May, 2020)
नेकपाका नेताहरुको काण्डै–काण्ड
महिलाकै कारण महरा, तामाङदेखि स्थापित र सोडारीसम्मले गुमाए पद
बुधबार, १५ असोज २०७६, १२ : ४४
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपाका नेताहरुको एकपछि अर्काे काण्डहरु पर्दाफास हुँदै जान थालेको छ । खासगरी महिलालाई दव्र्यवहार गरेकै अभियोगमा नेकपाका झण्डै आधा दर्जन नेताले आफ्नो पद गुमाएका छन् । सभामुख कृष्णबहादुर महरा पछिल्लो सिकार भएका छन् ।
हुन त कांग्रेसलगायत अन्य राजनीतिक दलका नेताहरुका पनि महिलासँग जोडिएका चर्तिकलाहरु नुसनिएका र नदेखिएका होइनन् । तर पछिल्लो पटक अन्य दलका नेताहरुको यस्ता घटना नदेखिरहेका बेला नेकपाका नेताहरुको भने श्रृंखलावद्ध रुपमा एक पछि अर्काे काण्ड दोहोरिन थालेको छ ।
२०७४ सालको प्रतिनिधीसभा तथा प्रदेश सभाको चुनाव यता मात्रै नेकपाका केही सांसदहरु महिलासँग जोडिएकै कारण पद गुमाउन पुगेका छन् ।
संसद् सचिवालयमा कार्यरत एक कर्मचारीले बलात्कारको आरोप लगाएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले हिजो पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका छन् । उनले आइतबार साँझ सचिवालयमै कार्यरत एक महिलालाई वलत्कार गरेको अभियोग अहिले लागेको छ ।
अनुसन्धान प्रक्रियालाई सहज बनाउन उनले राजीनामा दिएको बताएका छन् । उनी मात्रै होइन, अन्य नेकपाका केही नेताहरु पनि महिलाकै कारण आफ्नो पद गुमाएका छन् ।
सुदुर पश्चिमका सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी पनि महरा जस्तै अर्का एक पात्र हुन् । पदीय आचरणमा नबसी महिलामाथि यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोपमा उनलाई मन्त्री पदबाटै मुख्यमन्त्रीले वर्खास्त नै गरेका थिए । उनलाई नेकपाले पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेको छ ।
तत्कालीन मन्त्री सोडारीले एक महिलालाई टेलिफोनमा मनलाग्दी भनेको अडियो रेकर्ड बाहिरिएको थियो । उक्त अडियो प्रधानमन्त्री केपी ओली सम्मले सुनेपछि मुख्यमन्त्रीलाई काठमाडौं बोलाई सोडारीलाई पदमुक्त गर्न निर्देशन गरेका थिए ।
प्रदेश ३ का नेकपा सांसद केशव स्थापितलाई पनि ‘मीटू’ लागेको थियो । केही समय प्रदेश तीनका भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री भएका स्थापितलाईपछि मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले वर्खास्त गरेका थिए ।
स्थापितमाथि सञ्चारकर्मी रस्मीला प्रजापतिले गत वर्षको कात्तिक ४ गते सामाजिक सञ्जालमार्फत काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर रहेको बेला यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोप लगाएकी थिइन् । त्यसअघि अर्की सञ्चारकर्मी उज्ज्वला महर्जनले पनि स्थापितले राति अबेरसम्म पटकपटक फोन गरेर दुःख दिने गरेको भन्दै ‘मीटू’ लगाएकी थिइन् ।
नेकपाको किसान महासंघका संयोजक रहेका पूर्वमन्त्री हरि पराजुलीलाई पनि महिला दुव्र्यहवारको आरोप लागेको थियो । उनले पनि त्यसपछि मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए ।
२०७२ सालको असार १५ गते धान दिवसका कार्यक्रममा रोपाईंमा सहभागी एक महिलामाथि यौन दुव्र्यवहार गरेको तस्विर र भिडियो सार्वजनिक भएको थियो । मदिराले लट्ठिएर रोपाईंमा महिलामाथि दुव्र्यवहार गरेकै कारण पराजुली पदबाट राजीनामा गर्न बाध्य भएका थिए ।
त्यासो त एक कार्यक्रममा मन्तव्य दिने क्रममा बोली चिप्लिँदा नेकपाकै सांसद शेरबहादुर तामाङको मन्त्री पद पनि गुमेको थियो ।
बंगलादेशमा एमबीबीएस अध्ययन गर्न जाने नेपाली छात्राबारे नकारात्मक टिप्पणी गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि तामाङले ‘नैतिकताका आधार’मा पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
१. अब रिचार्ज र सिमकार्ड किन्दा थप २ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने
२. धानको बीउ नपाउँदा अन्नको सङ्कट बढ्ने त्रास
३. डब्ल्यूएचओसँग सबैसम्बन्ध तोडेको ट्रम्पको घोषणा
४. भेरीमा बगेका नवराजको प्रहरी बन्ने सपना
५. नेकपाको आकस्मिक सचिवालय बैठक वालुवाटारमा बस्दै
६. रुकुम घटनाको दोषीलाई कारबाही गर : राष्ट्रसंघ
७. शुक्रबार पुष्टि भएका२७ संक्रमित रातभर अस्पतालको गेट बाहिर
८. पुनर्निर्माणका काम गर्दा पालना गर्नुपर्ने छ यस्ता नियम
९. बजेट परिणाममुखीभन्दा प्रचारमुखी : काँग्रेस
६. कुन क्षेत्रका लागि कति बजेट बिनियोजन गरियो ? बजेटमा के के छन् मुख्य कार्यक्रम !
७. नेकपा काँग्रेस आरोप–प्रत्यारोप ! कसका कारण हट्यो संविधान संसोधन विधेयक ?